18ka May Waa Maalin Ku Weyn Somaliland Hanbaliyo
Monday May 09, 2022 - 08:10:03 in Articles by Hadhwanaag News
W/Q: Hamse Riiraash.
Sida aad ka warqabtaan waxa fooda inagu soo haysa maalin weyn,somalilana si gaara ugu suntan.
Maalintaas oo ahayd maalintii lagu dhawaaqay dibna loo iclaamiyay somaliland biritishku xukumaayay,kuna yaacday somalia iyaga oo raadinaysay riyo ahayd helitaan shan soomaali ah oo hal calin leh,taas oo ahayd riyo iyo jilbood aan wax ka run ahayn amaba rumoobin.
Maalintaas aan ka waramayaana waa 18Ka may oo dadka reer somalilana si khaas ah ugu weyn.
Muddo ku dhow soddon sannadoodna waxa ay qabsadeen wax balaadhan allana ku manaystay nabad badan taas oo ay ku dhaaftay cid walba.
Waxa ay dhisteen haykal, lacag ciidan dawlad iyaga oo maalinba maalinta xigta gaadhayay kolba wax,taas oo ah dhanka horu socodka.
Somaliland waxa ay gaadhay heer ay caalamkuna usoo jeestaan oo ay fiiriyaan kolba waxa ay samaysteen oo wanaaga,taa oo ay ka caajiseen wadanada lajaarkii in ay gaadhaan heerka ay gaadheen reer somaliland.
Dalka haatana waxa uu marayaa meeshii ugu fiicnayd anigoona Hanbaliyo u diraya dadka reer somaliland.
SannadkAn waxay u muuqataa in aad looweynayayo 18ka may
Xukuumada waan ugu hanbaliyaynanaa dadaalada iyo wax qabadada tirada lahayn ee ay wado